Abramovich oo mushaar badan kusoo xero gelinaya Falcao. - Caasimada Online
Home Warar Abramovich oo mushaar badan kusoo xero gelinaya Falcao.
Abramovich oo mushaar badan kusoo xero gelinaya Falcao.
Milkiilaha kooxda Chelsea Roman Abramovich ayaa isku diyaarinaya inuu Radamel Falcao ka dhigo xidiga ugu mushaarka badan kooxdiisa Chelsea, wuxuuna weeraryahankaan jeebka ugu shubi doonaa 10 milyan oo ginni sanad walba, hadii uu yimaado Stamford Bridge.
Weeraryahanka qaranka Colombia, ayaa ah ninka koowaad ee suuqa kala iibsiga diirada ugu saaran Chelsea, Bilyuuneerka Ruushka u dhashay ayaana doonaya inuu weeraryahanka Koonfur America ka dhigo weeraryahan kale oo magac leh ee uu keeno Galbeedka London.
Wargeyska Afka dheer ee kasoo baxa dalka Ingiriiska Sportsmail ayaa ogaaday inay Blues 26-jirkaan ku dalban doonto heshiis ah inuu 200 kun oo ginni isbuucii ka qaato kooxda, si ay uga soo afduubtaan kooxaha doonaya.
Weeraryahanka haatan kooxda ku sugan Fernando Torres, ayaa ah ninka kooxda ugu mushaarka badan wuxuuna isbuucii ka qaataa 175 kun oo ginni.
Dhanka kale, xidiga 16-jirka ah ee Chelsea Connor Hunte oo ay horay u dooneysay Man United ayaa ku dhow inuu kooxdiisa Blues heshiis cusub oo waqti dheer ah la galo.